Nyika Yekutsvaga Kushambadzira mu2015 | Martech Zone
Ini nguva pfupi yadarika ndataura neboka randakagara ndichikokwa kuti nditaure naro pamusoro pemakore mashanu apfuura. Pane imwe nguva mukukurukurirana musoro wenyaya wakashanduka kushandisa kiyi yekushandisa. Shaya dzakadonhedza apo ini ndakaudza vateereri kuti vasiye kunetseka nezve kiyi kiyi densities uye mashandisiro mune zvese zvirimo. Ndichiri kufunga kuti kiyi yakakosha kushandisa mukati memusoro wepositi, kune chikamu chikuru ini ndinotenda uri nani pane wakanangana nekunyora zvakanaka pane kuyedza kunyorera injini dzekutsvaga.
Izvo zvaisave zvechokwadi makore mashoma apfuura, isu zvinodiwa kuve chirongwa kuitira kuti injini dzekutsvaga dzinzwisise mamiriro ezvinyorwa zvedu. Asi iko kutenda kwangu izvozvi kuti kufambira mberi kweGoogle kunotora toni yezvakasiyana mukutarisa - kusanganisira nhoroondo yesaiti, chiremera chemunyori, zvirevo semazita ezita, mazita echigadzirwa uye geographies - kuona kukosha, masimba uye pakupedzisira chinzvimbo chemapeji.
Pandinobvunzwa nevanhu vari kutanga mabhizinesi matsva kwavanofanirwa kutarisa kushambadzira kwavo pamhepo, kushambadzira kwekutsvaga kunowanzo kuve padyo nepamusoro peshungu Ehe zvinoenderana padanho revatengi vavariro kana kudiwa kweiyo nyowani sevhisi, kureva kuti vangani vanhu vari kutsvaga zvigadzirwa nemasevhisi. Kukosha kwekutsvaga kwekutsvaga nhasi kunoratidzwa neyedu nyowani infographic yakagadzirwa ne JBH Kushambadzira. Iyo inoratidza kukosha kwekutsvaga kwekudhirowa pane yazvino data kubva SimilarWeb padanho rekudiwa kwevatengi kuburikidza nekutsvaga uye kusanganisira anoshanda mazano uye ongororo kubva kune dzimwe nzvimbo dzepamusoro kudzidza nezve kutsvaga senge Moz, Tsvaga Engine Engine uye Zvitsva zvekutsvaga. Dave Chaffey
Iyi infographic inoputsa iyo yakatarwa yenyika yekutsvaga kushambadzira zvakanaka, kusanganisira zvese zviri zviviri yakabhadharwa kutsvaga (kubhadhara pikicha) uye organic search (zvakasikwa zvinzvimbo). Yekutsvaga injini yekutsvaga ichiri yakakosha yepakati online uye haifanire kuregererwa. Ndichiri isu hatisi makuru mafeni eiyo SEO indasitiri uye mazano ekunyengera ayo vanachipangamazano vanowanzoisa izvo zvinoisa vatengi vavo munjodzi yekunyoreswa-indexed, ichiri chinhu chinoshamisa kune vedu vatengi kuziva izvo zvavanotarisira kutsvaga uye nemabatiro avari kuita kune izvo zvakanyorwa uye zvakagovaniswa kune vedu vatengi 'nzvimbo uye zvedu.
Tags: 2015Dave Chaffeyjbhkutsvaga kushambadzira infographicnjere dzakangwarachivaimamiriro ekutsvaga kushambadzira
Iwe Hausi Kuwana Kutaura maGigs Nekuda Kwako Kwepamhepo Kuvapo